enkulu romanticcomment ‘kuza nam’ gesture. Kuba phantse nesiqingatha abafazi abo anayithathela bafudukela kuba uthando, alikwazi ukwahlula kangaka, ngokunxulumene omtsha uphando. Amakhaya surveyed, abantu yokufumana phandle ukuba zingaphi kokuba bafudukela ngenxa yabo budlelwane kwaye oko kwenzeka emva. Icace phandle, uyise ukuba ube kunye zakho ezibalulekileyo ezinye zenza okungakumbi ngokufanayo kunokuba ucinga. Phantse omnye kwi-ezintlanu abaphenduli kusini na ubudlelane relocation kwaye wesithathu abo ekwenzile oko ngaphezu kwakanye. Abafazi kusini na ekubeni ngocoselelo ngakumbi kusenokwenzeka ukuba ukusa kunokuba abantu. emva shenxisa, ishumi elinesibhozo ipesenti wathi relocating ayikwazi ukugcina zabo rocky budlelwane, ishumi elinesixhenxe ipesenti disliked zabo, indawo, kwaye elinanye ipesenti nkqu wawa ngothando kunye umntu ongomnye. Ekugqibeleni, ke, malunga apho yakho amaxabiso ukuxoka. ‘Kuphela into abaya kuyenza kum yiya uluthando,’ Peril utshilo. ‘Ubomi bam, mna wouldn khange ndicinge ukuba umsebenzi yi-ngokwaneleyo ka-isizathu yiya naphi na budlelwane nabanye ingaba yintoni limisela apho ndikhona. Ngamanye amazwi, akukho zeentloni ukuba ufuna ukushenxisa kuba uthando nokuba isebenza okanye hayi. Mna bafudukela mbombo zone zeli kuba budlelwane. Thina wathetha kakhulu phambi, ngethuba, kwaye emva ukuba uqinisekise ukuba yam ngase waba kangangoko malunga indawo njengoko kwakunjalo malunga naye. Oko kwakulungile, ngenxa yokuba thina yahlula amicably a ezimbalwa eminyaka kamva. Kodwa ndiza? intloko-ko-heels ngothando kunye Pacific Umntlantshona, abahlobo, njl-njl, ukusa ngapha ihlabathi. Yena bayilibala ukuthi lowo nento yokuba sele ebona umntu ongomnye.
Oko wathabatha okomzuzwana ukuze bumthetho indlela yam umva ukusuka ukuba omnye. Wam omnye enye ka-icebiso: Musa ukususa ukuze iqabane lakho. ‘Umyeni wam mna batshata kodwa abahlala kwiindawo ezahlukeneyo i-american izixeko akuba onayo wanikela umsebenzi kwi-Rwanda. Wafuduka kwaye ndalandela inyanga enye kamva, eshiya ngasemva phupha lam umsebenzi. I-hambisa pushed nam uye wabaleka wam photo filmmaking ishishini isigxina, kwaye nangona mna ke kakhulu worried malunga ukufumana umsebenzi, ngayo yonke intliziyo ngaphandle kakhulu ngcono kunokuba mna elindelekileyo. Kwiminyaka emihlanu kamva kwaye ndiza? ukuqhuba ishishini lam isigxina.
Kokuba usapho apha kwaye andiyenzanga. Luckily, bazalwana owakhe amazing faraway usapho bandinceda bangene i-apartment apha xa sifuna waphula phezulu. Wam takeaway waba ungqinelwano amandla ingaba ngenene skewed kwiintlanganiso i-qabane kunye ngakumbi-mali ukhuseleko kunye noqhagamshelwano kwisixeko (duh, ndiyaqonda). Kodwa andiqondi regret i yiya, ngqo. Mna kwafuneka cultivate ezininzi ukuzimela kwaye maturity emva kokuba mna kwaba kanye kwakhona.
‘Mna yaye oku xa ndandisele
Mna shudder ucinga wam intombi ngokwenza oku. Mna bafudukela ukusuka Boston ukuba Los Angeles kunye yam ke-boyfriend. Akazange aphile happily ngonaphakade emva naye, kodwa mna baye bahlangana umyeni wam kwi-Los Angeles emihlanu emva kokuba mna bafudukela apho. ‘Mna bafudukela kunye yekholeji boyfriend kuwo karhulumente, ukususela Pittsburgh ukuba Nefiladelfi. Mna abazange bazi umphefumlo kwi-Nefiladelfi, waba zange wahlala phaya, okanye nkqu watyelela ngaphezu kabini. Andiyenzanga kuba umsebenzi ilinde kum, mhlawumbi. Ukujonga emva ngoku, kubonakala ngathi i-wonke lotta esisimumu.
Yokuqala embalwa ezayo baba ekunene
Ndifuna ukufumana watshata waza asikwazanga, ngoko ke sithi, babebaninzi limbo. Akunyanzelekanga ukuba nkqu becinga emva kwelo xesha, kodwa kwaba umngcipheko ukuba ihamba kakuhle kwi-esiphelweni. Sisebenzisa watshata amabini eminyaka ngoku kunye ezimbini abantwana. ‘Mna graduated kwi college kwaye kwezintandathu emva koko wafudukela ukusuka Iowa ukuba Colorado ukuba abe kufutshane a boy ndandidibana kwi-Mexico kwi entlakohlaza ukuwaphula. Ndabaxelela wonke umntu abo babeya mamela ukuba wam kokuba nto ukwenza kunye boy (kuquka kuye). Ndaba akukho msebenzi, akukho prospects, akukho ndawo ukuze siphile, kwaye malunga dollazi ezintandathu anamashumi bucks wam pocket. Silifumene watshata kwaye kuba beautiful -yeminyaka ubudala nentombi. ‘Ndandidibana a guy i-intanethi kwi-Yahoo Personals umva xa akukho namnye kusetyenziswa i-intanethi dating kwaye bafudukela ukusuka Florida ukuba Raleigh. Thina anayithathela sele watshata nineteen eminyaka ngoku kwaye ingaba u-abantwana. Ndafunda ukuba ke kukunceda kakhulu ethabatha nethuba kwi into ukuba ikhangeleka andwebileyo wonke umntu ongomnye. Ngaphandle, ungasoloko yiya kwakhona. ‘Mna bafudukela mbombo zone zeli kwaye ushiye career mna wayemthanda kuba umyeni wam ke military career, kuphela iinyanga emva silifumene watshata. Ke sele ngonyaka kwaye ngoku ndiza? ukuzama nani izinto ngaphandle, kodwa mna anayithathela wafunda kakhulu malunga ngokwam kwaye malunga budlelwane nabanye ngethuba ukuba ixesha. Ke sele ngonyaka ka-ukuqonda, coping, yamkela, ukufunda, kwaye zikhula. nam iinyanga ezimbalwa kamva ngenxa yokuba yena apparently liked kum ngcono xa ndandisele kakhulu kude ukubona yithi rhoqo. Kodwa wafuduka kude ixesha elide eyadlulayo, xa mna? kuphila apha kwaye uthando ngayo. Ndicinga ukuba ufumene i-ngcono isiphelo le yaba. ‘Mna bafudukela ukusuka Epennsylvania ukuba California. Thina anayithathela sele kunye ishumi elinesihlanu leminyaka, watshata zilithoba, zilishumi kwiminyaka eyadlulayo mna etsaliweyo kuye emva Epennsylvania. Ubomi umngcipheko baza bathabathela chances ndiza ndonwabe kunye akukho ukuzisola. ‘Mna besiya Norfolk, Virginia, apho ndiya anayithathela zange sele, kuba budlelwane ukuba waba? kakhulu omtsha, kodwa kakhulu ngamandla ezinzima. Thina waphula phezulu ishumi kwiinyanga ezintandathu kamva, kwaye mna bagcina indlu. Ndiza kwi-inkqubo uthengisa ngoku, kwiminyaka emithathu emva kokuba siye bought ngayo, ngexesha massive ilahleko. ‘Mna liquidated ubomi bam ukusa ku-ecosta Rica ukuba ube kunye boyfriend yam ezimbini ubudala. Mna ndawufumana waba WATSHATA kwiiveki ezimbini emva arriving. ‘Mna ke abahlala Park City, Utah kwaye wabona lencwadi ithi phezulu tourist kwi bar. Waba abahlala Cleveland, kodwa sifumene ngaphandle thina kunye ukhulele e-Indiana. Thina ezivaliweyo phantsi le bar kwaye wachitha elandelayo emva kweminyaka emibini Skyping, Ubuso ukubamba ixesha, kwaye flying emva kwaye phambili mbombo zone zeli de silifumene reluctantly besiya Cleveland. Silifumene watshata, mna anayithathela grown ukuba uthando Eohio, kwaye siya kuba baby kwi indlela. Yena ke likhulu oluntu ekubeni mna anayithathela ngonaphakade ezaziwayo. Micaela Mackenzie yi freelance journalist specializing kwi-impilo, inkcubeko, kwaye tech, kwaye yena yithi rhoqo kunegalelo ukuba outlets njenge Zokuthintela, Abafazi ke, Impilo, Imilo, Allure, Abantu ke, Impilo, Uyohane Hopkins Impilo Kovavanyo, kwaye ngaphezulu. Loomama Impilo lithatha inxaxheba ezahlukeneyo affiliate lentengiso iinkqubo, oko kuthetha ukuba sibe ukufumana imali commissions kwi editorially esikhethiweyo iimveliso ukuthengwa ngokusebenzisa zethu amakhonkco ukuba retailer zephondo
← Mexican Abafazi e Mexican Cupid
Mexico Abafazi →